जापानमा एक परिवार भएर हामी सबै सेवकाइ गर्दैछौं । – Bachan Tv
BACHAN TV April 23, 2018
मोरङ्गको लेटा∙ नगरपालिका वडा नं ३ मा जन्मिनुभएको श्री सुर्य राई लेटा∙ प्रशंसा चर्च कमलपुरको एल्डर, छिमेकी सेवकाइ नेपालको निर्देशक एन. सि. एफ. नेपाल युवा समिति पूर्वान्चलका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ र हाल उहाँ जापानको टोकियोमा बसोवास गर्दैआउनुभएको छ । उत्साह नेपाली चर्च टोकियोमा एल्डरको रुपमा सेवाकाइ गर्दै आउनुभएको श्री सुर्य राई नेपाली इसाई एकता समाजको समेत अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँसँगको अन्तर्वार्ताको मुख्य अंश प्रस्तुत छः
जापान कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
म जापानचाँहि रोजगारीको सिलसिलामा आएको हुँ र जापानमा प्रायः सबैजसो पढाई तथा रोजगारी कै लागि आउँछन् ।
कसरी प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्नुभयो ?
हाम्रो परिवार(रीतिले रित्याएको र थितिले थिचेको) एकदमै परम्परावादी थियो । मेरो बुबाको कारण हामी ख्रीष्टियन भयौं । उहाँ आफै झारफुक गर्ने सामान्य धामी, कुलपूजा गर्ने, धर्मकर्म गर्ने व्यक्ति साथै अत्याधिक जाँडरक्सी सेवन गर्नुहुन्थ्यो । हाम्रो परिवार बुबासँगै घरमा सबैजसो बिरामी परिरहन्थ्यौं । एकपटक बाबा १५ महिनासम्म बिरामी पर्नुभयो । सकेसम्म सबै ग¥यौं । तर निको हुनुभएन । त्यसपछि अन्तिम विकल्पको रुपमा हामीले प्रभु येशूलाई विश्वास ग¥यौं । नभन्दै प्रभुले बुबालाई चंगाई दिनुभयो ।
हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्दा हामी नै हाम्रो गाउँमा पहिलो इसाई थियौं तर अहिले प्रायः गाँउमा धेरैजसो ख्रीष्टियन भएका छन्, मण्डली स्थापना भयो र बुबा आफै पनि पास्टरीय सेवामा हुनुहुन्छ । प्रभुलाई महिमा होस् ।
जापनमा नेपाली इसाईहरुको अवस्था कस्तो छ ?
त्यहाँ नेपालीहरुको प्रवेश धेरै वर्षदेखि निरन्तररुपमा भइरहेको छ । जसमा नेपाली इसाईहरु पनि प्रशस्त मात्र आइरहनु भएको रेकर्ड छ तर नेपाली भाषी चर्च अभैm स्थापना हुन सकेको छैन । यसका विभिन्न कारणहरु छन् । जापान निकै नै कानुनी तथा व्यवस्थाहरु अत्यन्त कडाइकासाथ लागू हुन्छ ।
अरु देशको तुलनामा यहाँ छुट्टीको समय एकनास हुँदैन । यस्तो अवस्थाले गर्दा कति विश्वासीहरु संगतिबिहिन भएर बसिरहनु भएको छ । संगति नहुँदा उहाँहरु आफू ख्रीष्टियन हुँ भन्न पनि लजाउनुहुन्छ । यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा जापानमा संगति स्थापना नभएको मेरो अनुभव छ । तर जस्तो विषम परिस्थितिमा पनि परमेश्वरको काम र राज्य रोकिदैंबन । हामी विगत ३–४ वर्षदेखि एकजुट भइरहेका छौं । फलस्वरुप नेपाली इसाई एकता समाज जापान गठन भइसकेको छ । प्रत्येक शहर र प्रान्तमा नेपाली भाषी संगति हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । कुनै पनि इसाई संगतिबिहिन नहोस् भन्ने मूल लक्ष्यकोसाथ यो समाज गठन भएको हो । यस एकता समाज सबै मण्डलीहरुसँग हातेमालो गरी अगाडि बढिरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने जापानमा नेपाली भाषी संगति र चर्चहरु बढ्दै गइरहेको छ । सुस्त भइरहेको इसाईहरु विभिन्न समयमा संगति गर्ने बानी विकास हुँदै गइरहेको छ । नयाँ वर्ष लगायत अरु समयमा यस समाजले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै आइरहेको
छ । त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा दिदीबहिनीहरुको उल्लेखनीय रुपमा उपस्थिति भइरहेको छ ।
जापानमा नेपाली इसाईहरुको संख्या कति होला? एकतामा कसरी समट्दै हुनुहुन्छ ?
जापानमा नेपालीहरुको संख्या लगभग ७५ देखि ८० हजारको हारहारी छ । जसमध्यै इसाईहरु ३५ सय देखि ४ हजारको संख्यामा छ। अहिले पनि धेरै ठाउँमा संगतिबिहिन भएर बसिरहेका अवस्थामा भेटघाटको निम्ति जान्छौं । यसरी जापानमा रहेका नेपालीबीचमा आत्मिक जागृतिको कार्य भइरहको छ । संगतिको निम्ति तृष्णा सबैमा जागेको छ ।
धेरै ठाउँबाट अहिले पनि संगतिको लागि फोन आउने गरेको छ । आवश्यक सहयोग र पहल हामीले गरिरहेका छौं । नेपाली इसाई एकता समाज जापानको आयोजनामा गोष्ठी तथा नयाँ वर्षको कार्यक्रम, ख्रीष्टमस कार्यक्रम आदि क्रियाकलापहरु आयोजना गरिरहेका छौं । यी यस्ता माध्यमबाट हामीले एक अर्कासँग नजिक हुन सम्पर्क र सम्बन्ध बढाउने, एकतामा राख्ने
कोशिस जारी छ । सँगसँगै हामीले इसाई समाजबाट नेपालमा भूकम्पपीडित, बाढीपीडित र अन्य सामाजिक कार्यमा पनि सहयोग गर्दै आएका छौं । हाम्रो लागि हजुरहरु सबैले प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोला । जापानमा अन्य बिदाको तुलनामा सेवा संगतिको लागि समयसँगै विभिन्न कुराहरुको समस्या छ । तर पनि हामी जापानको सबै शहरहरुमा नेपाली संगति स्थापनाको लागि जुटेका छौं । जापानी मण्डलीहरु र अगुवाहरुसँग पनि सहकार्य गरिरहेका छौं ।
जापानको धेरै मण्डलीहरु र संगतिहरु छन् तर उत्साह नेपाली मण्डली नै पहिलो संगति मण्डली भन्ने आधार के छ ?
मेरो सेवकाइ गर्ने मण्डली उत्साह नेपाली मण्डली टोकियो हो र हाम्रो मण्डली नै जापानमा पहिलो नेपाली मन्डली हो । हामी घमण्ड गर्दैनौं तर यो कुरा कहिलेकाँही आउने गर्दछ । किनभने जापानमा धेरै ठाउँहरुमा संगतिहरुको
खोजीकार्य भयो । नेपाली संगति पाउने स्थिति भएन र विवाह, बप्तिस्माको लागि नेपालीहरुलाई गाहो भयो । नेपाली पास्टर हामीसँग पनि थिएन र इसाई एकता समाज जापानको पहलमा र उत्साह नेपाली मण्डलीको टोकियोको सहकार्यमा नेपालबाट पास्टर बोलाएर हामीले जापानमा नै पहिलो पास्टर चन्द्र खपांगीज्यूलाई पास्टर अभिषेक ग¥यौं । अहिले पवित्र विवाह, बप्तिस्मा, बाल अर्पण आदि धार्मिक कार्यको लागि धेरै सहज र सरल भएको छ । यो हिसाबले हामी नै पहिलो हौं भन्ने हो । यसलाई ठूलो रुपमा नलिनु राम्रो हुन्छ तर जहाँ जे जसरी भए पनि मिलेर हामी काम गरोरहेका छौं । महत्वपूर्ण कुरा हामी एकतामा छौं र जापानमा एक परिवार भएर हामी सबै सेवकाइ गर्दैछौं ।
नेपाल र जापानका इसाईहरूबीच कसरी सुमधूर सम्बन्ध स्थापना गर्न सकिन्छ ?
हामी बिदेशमा भए तापनि हाम्रो तन्मन् संधै नेपाल र नेपाली प्रति नै छ । जापानभरि छरिएर रहेका नेपाली इसाई दज्युभाई, दिदीबहिनी तथा नेपाली संगति, नेपाली इसाई एकता समाज जापानको एकै उद्देश्य भनेको हामी जहाँ छरिएर रहे तापनि मिलेर एकतामा रहेर हाम्रा प्रभु येशूको सेवकाइ गर्नु नै हो । नेपालका इसाई अग्रजहरुलाई जापानको हाम्रो कार्यक्रममा निम्तो गरेर सामाजिक कार्यमा हातेमालो गरेर सेवकाइमा सहायता गरेर भावी युवाको पुस्तालाई असल नेतृत्व प्रदान गरेर, प्रार्थना साथ हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर रहन सक्दछ । यो सबै कुराको लागि नेपाली इसाई एकता समाज जापान र हाम्रो उत्साह मण्डली टोकियोमा नै सकारात्मक र प्रतिवद्ध छौं ।
जापानमा इसाई संगति विश्वासीहरुको चुनौतीको बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
जापानमा हामी अत्यन्तै व्यस्त जीवन बिताइरहेका छौं । हामीसँग भेटघाट गर्ने र प्रार्थना गर्ने समय पनि नहुन सक्छ । तर म भन्न चाहन्छु कि जापानमा व्यस्ततासँगै विभिन्न समस्याग्रस्त भएर पनि हामी बाँचिरहेका हुन्छौं। हामी दिन प्रतिदिन जब संगति जान्छौं, प्रार्थना गर्छौं, प्रभुका जनहरुसँग एकतामा एकसाथ रहन्छौं । एकले अर्काको निम्ति प्रार्थना गछौं । प्रभुको वचनमा रहेर उहाँको भयमा जीवन जिउँछौ भने हाम्रो सबै असफलताहरु, डरको आत्माहरु, अशान्तिहरु र बिग्रिएका सम्बन्धहरुमा प्रभुले सहायता गर्नुहुनेछ । प्रभु येशूले हामीलाई विजयको जीवन दिनु हुनेछ (व्यवस्था २८ः १२–१३) । मा परमेश्वरको वचनमा लेखिएको झैं हामीलाई शिरमा राख्नु हुनेछ, फेदमा होइन ।
संसारभरि नै अहिले नेपाली भाषी संगतिहरु वृहत्तरुपमा स्थापना भैरहेको छ । यसै दौरान पनि प्रभुको अनुग्रहले हामीलाई डो¥याउँदै हुनुहुन्छ । जापानको लागि साथै नेपाली भाषी संगतिहरु र सेवकाइको लागि निरन्तर प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला । साथै नेपालमा रहनुहुने सबै मण्डली, सेवकाइ र अगुवाहरुको लागि हाम्रो निरन्तर प्रार्थनामा छ । हाम्रो देश नेपाल समृद्धितर्फ
बढ्ने छ । शान्ति स्थापना हुनेछ । सबै इसाईहरूको एकता बलियो हुने कुरामा म ढुक्क छु ।
अन्त्यमा, मेरो महत्वपूर्ण भनाइ राख्ने सुनौलो अवसर दिनुहुने वचन पत्रिकालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु । नेपाली इसाई एकता समाज जापान र उत्साह नेपाली मण्डली टोकियोबाट पनि, जयमसिह !